Lynda ANDRIATSITONTA 0 Commentaire avr 17, 2018
Namita ny adidiny ny solombavambahoaka voafidy teny amin’ny boriborin-tany faha-enina. Nanao tatitra momba ireo fivoriana tsy ara-potoana efatra teny amin’ny Antenimierampirenena izy. Tao amin’ny efitrano malalaky ny boriborin-tany fahenina no nanaovany izany androany 17 aprily 2018. “Lalàna 13 no nolaniana nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana miisa efatra. “Nisy tamin’ireo lalàna ireo no niteraka resa-be toy ny lalàna fehizoro momba ny fifidianana, ny faritra ara-toekarena manokana (ZES). Matoa nolaniana, hitondra fampandrosoana izay fa tsy hoe: “fivarotana tanindrazana ”, hoy ny solombavambahoaka Raherisoa Vololona Victorine. Nahafeno fepetra ny fanaovana tatitra satria nisy ny fametahana afisy fiantsoana ny vahoaka fito andro nialohan’ny andro nanaovana ny tatitra, nahazo alalana tamin’ny boriborin-tany faha-enina hamory vahoaka.
Manam-pikasana hamory vahoaka eo anoloan’ny lapan’ny tanàna Analakely ny solombavambahoaka TIM sy MAPAR amin’ny sabotsy 21 aprily 2018 ho avy izao. Raha hanao tatitra momba ny fandaniana ny lalàm-pifidianana ihany nahoana no tsy any amin’ny faritra nahalany azy no manao izany ireo solombavambahoaka fa tsy mitangorona eny amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely? Nambaran’ny solombavambahoaka Raherisoa Vololona Victorine fa adidy ny manao tatitra amin’ny vahoaka saingy tsy tokony ireo vahoaka indray no handany saran-dalana hiakatra eto Antananarivo renivohitra hihaino azy ireo.
‹ RESPECT DES DROITS DE L’HOMME: Des défis à relever	› Hain-tany any Atsimo : Atao fangataham-bola